Tsy mitsahatra miasa mandresy lahatra ny olona ny amin’ny toetra maha-mpanota azy ny Fanahy Masina hatrizay hatrizay. Matetika anefa, avonavona no setriny ka mampangina izany feo izany ny olona satria heveriny fa tsy mila manamarin-tena na amin’iza na amin’iza izy. Tsy tiany ho re akory izany fitiavan’Andriamanitra izany na izay ilàna fanamarinana eo anatrehany.Nefa tian’Andriamanitra ny olona izay noforoniny, ary noporofoiny izany fitiavany izany tamin’ny nanomezany “ny Zanany Lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” (Jaona 3.16). Ny Zanak’Andriamanitra dia “natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika” (Romana 4.25). Tamin’ny nahafatesan’i Jesoa sy ny nitsanganany tamin’ny maty dia nasehon’Andriamanitra ny haben’ny fitiavany sy ny fitsaràny marina.
Tsy maintsy nahazo fahafaham-po ny fahamarinan’Andriamanitra, koa naka an-tsitrapo ny toeran’ny olo-meloka ny Tompo Jesoa. Nanao sorona ny tenany Izy ary nitondra ny fahotantsika.rehetra : “Ary nataon’i Jehovah nihatra taminy avokoa ny helotsika rehetra” (Isaia 53.6). Voavaha teo imason’Andriamanitra noho izany ny olana momba ny ota, satria tanteraka ny fanonerana, “mba ho marina Izy sady hanamarina izay manana finoana an’i Jesoa” (Romana 3.26).Afaka mamela ny olo-meloka izay voakoso-pahotana Andriamanitra ankehitriny, ary manome antsika fahalalahana hiditra ao amin’ny tontolo misy Azy. Ao no ahitantsika ny seza fiandrianan’ny fahasoavana, izay ahazoantsika maneho ny fangatahantsika rehetra amin’Andriamanitra izay te hitahy antsika.
Editeur BPC- La bonne semence- France Ref SV 505MA